AnkerWork B600, webcam ugu dhameystiran suuqa | IPhone News
AnkerWork B600, webcam ugu dhameystiran suuqa
louis padilla | 05/05/2022 20:40 | La cusbooneysiiyay 06/05/2022 13:15 | Qalabka IPhone, dhowr
AnkerWork B600 aad ayuu uga badan yahay webcamka sababtoo ah waxaa ku jira, Marka lagu daro kamarada 2K 30fps, laba ku hadla, afar makarafoon iyo nalka iftiinka LED-ka.
Kaamirooyinka mareegaha ayaa noqday lama huraan maalmahan intiisa badan. Ama loogu talagalay samee shirarka fiidiyooga goobta shaqada ama asxaabta iyo qoyska, ama si aan u samayno muuqaalkeena Nool, haysashada kamarad shabakadeed waa mid lagama maarmaan u ah ku dhawaad ​​​​qof kasta desktop-kiisa, soosaarayaashuna waxay ku hagaajiyaan moodooyinkooda sharad ka baxsan kamaradaha caadiga ah, sida AnkerWork B600 oo ah kan aad uga badan kamaradaha webka.
Kamarad ahaan waxaan helnaa tayada 2K (1440p) ilaa 30fps, oo ka sarreeya inta badan kamaradaha webka ee aan suuqa ka heli doonno. Laakiin sidoo kale waxaa ku jira laba ku hadla oo dhinacyada, afar makarafoon iyo bar LED ah oo lagu hagaajin karo xoojinta iyo heerkulka, gaaritaanka ku soo ururi wax kasta oo aad u baahan tahay hal qalab si aad uga dhex muuqato shirarka fiidiyooga
2 App-ka AnkerWork
3 Sawirka, iftiinka iyo codka
Xallinta sawirka 2K (1440p)
Iftiinka gacanta iyo kan tooska ah (Iftiinka iyo heerkulka)
joojinta qaylada, joojinta dhawaaqa
Kobcinta sawirka iyadoo la isticmaalayo garaadka macmal
FOV la hagaajin karo (65º, 78º, 95º)
daboolka gaarka ah
2 ku hadla 2W
H.264 qaab muuqaal ah
Fiidiyowga, sida AnkerWork ugu yeerto B600, waa mid culus oo weyn, cabbir ahaan iyo miisaan ahaan aad uga weyn inta badan moodooyinka kale ee aad taqaanid. Waxa kale oo ku jira walxo aan lahayn kamarad kale oo webcam ah, markaa faraqa ayaa ka badan mid la caddeeyey. Dhismaheedu waa wanaagsan yahay, oo leh caag sida walxaha ugu sarreeya laakiin leh dhammaystir macdan ah oo siinaya muuqaal qiimo leh. Waxay u egtahay mid aad u adag in kasta oo ay le'eg tahay haddana waxay leedahay naqshad aanad ka fikirayn inaad ku darto miiskaaga.
Waxaad ku dhejin kartaa dusha sare ee kormeeraha, sida webcam kasta, laakiin sidoo kale waxaad haysataa ikhtiyaarka ah isticmaalka tripod ama Nidaam kasta oo kale oo xirxiran oo leh 1/4 maroojis mahad leh dunta salka ku haysa. Saldhigga waxaa lagu hagaajin karaa kormeere kasta, ha ahaado mid cidhiidhi ah sida laptop-ka ama dhumucdiisuna, xitaa dhabarka qaloocan, sida kiiskeyga. Si aad u wanaagsan ayay u xajisaa wayna deggan tahay. Waad u foorarsan kartaa oo rogi kartaa si aad u hesho xagasha saxda ah ee aad diirada saarto.
Si aad ugu xidhid kombayutarkaaga waxa uu leeyahay fiilada USB-C ilaa USB-C, kaas oo ilaalin doona qaadista dhamaan sawirka iyo codkaba, laakiin sidoo kale, waana markii ugu horaysay ee aan ku arko kamarad noocaan ah. , u baahan cunto dheeraad ah, Waxaan u maleynayaa in bar nalka LED. Korontada waxaa lagu gaaraa fiilo leh adabtarada korontada oo si toos ah ugu socota godka, kuma xidhna kombayutarkaaga, markaa waxa kaliya oo uu isticmaali doonaa mid ka mid ah USB-C-gaaga. Waxa kale oo ku jira USB-A dheeraad ah oo aad ku xidhayso qalab dheeraad ah, kaas oo noqon doona sida haddii aad ku xidhid kombayutarka, wax aan waligiis dhibin.
Naqshadeynta kamaradda waxaa loogu talagalay in dahaarka laftiisa, kan ku siinaya xasilloonida maskaxda ee aan qofna ku eegayn marka aadan rabin, waa kan ku yaal bar laydhka LED-ka ah, si marka aad rabto. fur kamarada baarka LED wuxuu fadhiyaa wax yar ka sarreeya muraayada si uu u iftiimiyo wejigaaga. LED-ka hore ayaa kuu sheegaya haddii kamaradu la isticmaalo (buluug) ama haddii makarafoonku shaqaynayo iyo haddii kale (casaan). Ugu dambayntii waxa aanu haynaa laba badhan oo taabasho dhinac ah si ay u dhaqaajiyaan makarafoonka iyo bar LED-ka, iyo kontoroolka taabashada hore si loo xakameeyo dhalaalka baarka LED-ka.
Dhammaan kontaroolada gacanta ayaa mararka qaarkood ku anfaca, laakiin sida caadiga ah waxaa aad loogu talinayaa in la isticmaalo mouse-ka si loo xakameeyo dhammaan hawlahan, taasna waxaan u haynaa Codsiga AnkerWork oo aan ku soo dejisan karno Windows iyo macOS labadaba (isku xirka). Codsigan waxaan ku xakameyn karnaa tayada sawirka (xararka, FOV, dhalaalka, fiiqan ...) iyo iftiinka (xoojinta iyo heerkulka).
App-ku waxa uu ina siinayaa hawlo toos ah oo si toos ah u isticmaala sirdoonka macmal si ay isu xakameeyaan. Tusaale ahaan waxaan kicin karnaa nal toos ah, ama waxa la yiraahdo "Solo-frame", waa qaab muuqaal ah oo kamaradu kugu raacdo oo had iyo jeer kugu hayso shaashadda, oo la mid ah waxa Apple uu ku sameeyo "Marxaladda Xarunta" ee FaceTime. Waxaan sidoo kale haynaa qaar ka mid ah hawlaha xiisaha leh sida "Anti-Flicker" si aan uga fogaano boodboodka nalalka qaarkood marka la isticmaalayo kamaradda.
Sawirka, iftiinka iyo codka
Tayada sawirka kamaradku waa wanaagsan tahay, xitaa xaaladaha iftiinka hooseeya waxay u mahadcelinayaan bar LED-ka, kaas oo aan dib u falanqeyn doono. Tijaabada aad ka arki karto fiidiyowga la socda maqaalka, waxaan adeegsaday shuruudo la mid ah kuwa aan inta badan ku isticmaalo baahinta podcast-ka YouTube-ka, kuwaas oo si sax ah u socda. halkii shuruudo aan fiicnayn laakiin waxay si fiican u muujiyaan waxqabadka kamarada.
Waa run in aan ogaaday daqiiqado ka mid ah duubista in ay jirto simay sawirka xoogaa la buunbuuniyay, waxaan filayaa in ay sabab u tahay dhimista buuqa iyo wax ka beddelka kale ee sirdoonka macmalku si toos ah u shaqeeyo. Laakiin marka laga reebo faahfaahinta, guud ahaan Aad ayaan ugu qanacsanahay natiijada kamarada ee arrintan la xiriira. Sidoo kale maskaxda ku hay in aan had iyo jeer isticmaalo xagasha ugu yar ee daawashada, sidaas darteed sawirka waa la gooyay oo qaar ka mid ah tayada tayada waa lama huraan.
Mas'uuliyadda weyn ee tayada sawirka ee bar LED-ka ee ku daraya kamarada. Si daacad ah, waxaan u maleeyay in ay noqon doonto wax aan faa'iido lahayn, sida ay dhacdo in kamaradaha kale in ay keenaan iyo waxa aanu gabi ahaanba wax ku biirin, laakiin arrin lid ku ah. Saamaynta iftiinka fiidiyooga waa mid la dareemi karo, iyo nidaaminta iftiinka xoogga ayaa sidoo kale faa'iido leh. Waxa aan tabayo waa in aad xakamayn karto heerkulka sawirka, ma aha oo kaliya iftiinka, tan iyo markii aan ogaaday in midabada ay aad u diiran yihiin xitaa isticmaalka kamaradda ee codkeeda ugu qabow.
Kuwani waa labada walxood ee leh waxqabadka ugu fiican ee AnkerWork B600, shaki la'aan. Xiga waa makarafoonka, ama halkii afarta makarafoon, kuwaas oo si fiican u shaqeeya laakiin qoraalka kama dambaysta ahi maaha mid u sarreeya sida sawirka ama iftiinka. Wax badan oo caqli-gal ah, buuqa iyo dhimista dhawaaqa iyo walxo kale oo ay ku daraan, waa wax aan macquul aheyn afar makarafoon oo ku yaal meel aad uga fog afkayga iyo qol aan sanqadh lahayn in ay bixiyaan natiijo la mid ah waxa makarafoon tayo leh sida mid aan isticmaalay inta badan fiidyaha.
Tani waa aragtida qof isticmaalkiisa ugu weyni yahay qulqulka, laakiin Haddii aan diiradda saarno shirarka fiidiyowga, natiijadiisu way ka fiican tahay tan ugu fiican. Dad badan oo lagu wareystay barnaamijyada telefishinka ee wakhtiga ugu muhiimsan ayaa jeclaan lahaa in la helo codka uu bixiyo B600 oo wata afartiisa makarafoon. Muuqaalka Raadaarka Codka ee diiradda saaraya codkaaga xitaa marka aad ka fog tahay sidoo kale waxay faa'iido u leedahay la kulanka ka qaybgalayaasha badan oo ka fog kamarada.
Oo waxaan ka tagayaa dhamaadka labada korantada ee 2W ee ku yaal dhinacyada kamaradda. Waxay xal fiican u yihiin kuwa isticmaala kumbuyuutarka oo aan lahayn kuwa ku hadla, laakiin kuma soo dhawaadaan waxa ay na siin karaan kuwa ku hadla afka. codku wuxuu leeyahay awood cadaalad ah, iyo tayo cadaalad ah, oo aan lahayn wax ka badan. Mar labaad, shirarka fiidiyowga, in ka badan oo ku filan, laakiin liidata in loo isticmaalo hadalka ugu muhiimsan si joogto ah kumbuyuutarkaaga.
Kaamirada AnkerWork B600 waxay ku habboon tahay kuwa raadinaya xal-hal-hal ah shirarkooda fiidiyowga, ama kamarad tayo wanaagsan leh oo loogu talagalay qulqulka. Iyada oo leh tayada muuqaal wanaagsan iyo bar iftiin la yaab leh oo wanaagsan, waxay ku habboon tahay baahinta tooska ah ama u fiirsashada qof kasta oo jooga shirarka fiidiyowga. Labada hawlood ee kale, makarafoonnada iyo kuwa ku hadla, ma gaaraan heerka lagama maarmaanka u ah in lagu shubo xaaladaha wanaagsan, in kasta oo ay aad uga badan yihiin kuwa ku filan shirarka fiidiyowga. qiimihiisu waa sarreeyaa, in la helo Amazon waa €229,99 (isku xirka) in kasta oo la tixgalinayo wax kasta oo ay ku jiraan, haddana aad uma badna.
Dib u eegida: louis padilla
Ku dhejiyay: May 5 ee 2022
Wax ka badalidii ugu dambeysay: May 6 ee 2022
nalka la dhisay
Makarafoonada iyo kuwa ku hadla ee ku habboon shirarka fiidiyowga
Makarafoono aan ku filnayn baahinta
Hadliye aan ku filnayn isticmaalka caadiga ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » iPhone » dhowr » AnkerWork B600, webcam ugu dhameystiran suuqa
Fortnite waxay ku soo noqotaa aaladaha Apple iyada oo loo sii marayo Xbox Cloud Gaming
Podcast 13x30: Pegasus, fayras kale oo khatar ku ah masiibada